မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်များအတွက် တောင်းသလောက်မရ ၄၀% ရာခိုင်နှုန်းမျှသာရရှိ | Ethnic Nationalities' Voice: Struggling Voices for Justice
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀၁ millions တောင်းထားတဲ့ဟာကို ဒီလ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ.အထိစာရင်းချုပ်အရ ၈၂ millions ကိုသာ လက်ခံရရှိသည် ဟု ကုလ၏ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြပါသည်၊ ဒီလိုငွေကြေးပြတ်လပ်မှုကြောင့် လာမည့်ရက်သတ္တပတ်အတွက်အကူးအညီပေးဖို. ထိခိုက်နိုင်တယ် လို. ကုလက ပြောကြားသည်၊
လောလောဆယ် ယာယီနေထိုင်ဖို.နေရာဆောက်လုပ်ပေဖို. ဒေါ်လာ သန်းတစ်ဝက်လောက်လိုအပ်တယ်လို. ကုလပြောခွင့်ရအမျိုးသမီး Amanda Pitt ကပြောပါသည်၊
အသက်ရှင်လွတ်မြောက်သူများအတွက် စပါတွေချက်ချင်းပြန်စိုက်လို.မရသည့်အတွက်ကြောင့် ထို.လူတွေကို တစ်နှစ်လောက် ဆက်လက်အကူးအညီပေးရအုံမည် လို. ကမ္ဘာ့စာနပ်ရိက္ခာပြောခွင့် ရှိသူ Paul Risley က ပြောကြားပါသည်။
ဒီလိုမလောက်တဲ့ကြာကပင် စစ်အစိုးရလူတွေနဲ. ကြံ.ဖတ်တွေပေါင်းပြီး ခိုးဝှက်၊ရောင်းစား၊လုယူမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အထောက်အထားနဲ.သတင်များရရှိနေပါသည်၊ သူတောင်စားထက်အဆင့်အတန်းနိမ့်တဲ့ဒီ မောင်ဘရွှေ တို.အုပ်စုတို.ကို မြန်ဆုံး ကြိုးကွင်းကျမှဖြစ်မည်။
Myanmar Cyclone Disaster Appeal Is Only 40% Funded, UN Says
June 12 (Bloomberg) — An international appeal to aid 2.4 million survivors of last month’s cyclone disaster in Myanmar is only 40 percent funded, the United Nations said.
A call for $201 million brought only $82 million in donations by June 9, the UN said inastatement.
International aid agencies are supplying Myanmar’s southern Irrawaddy River Delta, the country’s main rice-growing region that was devastated by Tropical Cyclone Nargis. Survivors were put at risk of disease and starvation because the military government refused to allow aid teams into the country for almost three weeks after the disaster, the UN says.
A shortage of funds may affect food, shelter and medicines reaching the region in coming weeks, the UN said. The May 2-3 cyclone left more than 134,000 people dead or missing.
“We need some halfamillion tarpaulins to help with shelters,” Pitt said.
The World Food Programme, which has distributed 11,000 metric tons of food to cyclone-hit areas since the storm, is now handing out cash to help people meet rising food costs, the UN said.
Cyclone survivors will probably need food aid forayear because Nargis destroyed fields, preventing planting, Paul Risley,aWFP spokesman, said in Bangkok earlier this week.
An estimated 200,000 hectares (494,210 acres), or 16 percent of the agricultural land in the Irrawaddy delta, was damaged by Nargis, the UN’s Food and Agricultural Organization says. The region’s five worst-affected states produce most of the rice, fish and pork for Myanmar’s 47.8 million people.
Last Updated: June 11, 2008 23:06 EDT